नीतिभन्दा स्वार्थरक्षामा केन्द्रित सङ्घर्ष | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
नीतिभन्दा स्वार्थरक्षामा केन्द्रित सङ्घर्ष
२०७७ मंसिर ५, शुक्रबार १२:०२ गते
नेपाली राजनीतिको गति र ध्वनि मण्डुक (भ्यागुता) शैलीको छ । न राजनीतिज्ञको बोलीको ठेगाना छ, न त्यसले कुनै अर्थ राख्छ । बरू लोककथाअनुसार भ्यागुताले पुकारा गर्दा इन्द्रले वृष्टि गर्छन् रे, तर नेतृत्वले बोलेर हुने त्यस्तो छैन केही । झन् छिनछिनमा नै एक ठाउँमा राखेर धार्नी पु¥याउन खोजे भ्यागुताले उफ्रिरहेर न धार्नी पुर्‍याइरहने स्थिति राख्छन् । गुट बनाउने र गुटभित्र पनि स्थिर भइनरहने लोभ र लाभका आधारमा परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति छ यिनको पनि ।
खासगरी, नेपाली प्रायः सबै दलभित्र छ यस्तै प्रवृत्ति । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपामा छ अहिले ज्यादा । बालहठजन्य प्रवृत्ति पनि छ उस्तै र गलाउने रणनीति पनि छ उत्तिकै । आलटाल गर्ने र विषयलाई अन्तै मोड्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिका निम्ति नयाँ होइन, तर जनमत र परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिअनुरुप परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै जानुपर्ने नेतृत्व झन्झन् छेपारोले रंग बदलेझैँ बदलिइरहने प्रवृत्ति शुभ संकेत हुँदै होइन ।
अध्यक्ष ओली पार्टी र सरकारको लगाम आफैँ खिच्न चाहन्छन् । दुवैको सारथि आफू एक्लै बन्ने चाहना उनको देखिन्छ । आफूले बोलेको र देखेको सपनालाई साकार पार्ने दृढतालाई अनुचित भनिहाल्न पनि मिल्दैन । कतिपय सन्दर्भमा पहिले बोलिहाल्ने अनि दबाब पर्न थालेपछि होस्/नहोस् त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान न्वारानदेखिकै बल लगाउने प्रवृत्ति उनमा छ । कुनै पनि विषय र त्यसको गहिराइ थाहै नपाई कुवामा हाम फाल्ने प्रवृत्ति सधैँ सुखद हुँदैन । जुन विषयमा प्रवेश गर्ने हो त्यसको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसले पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरुको जोड–घटाउ गर्ने, सकारात्मक नतिजा आउने प्रतिशत बढी भएमा मात्र कार्यारम्भ गर्ने गरिए त्यसले सृजनशील नतिजा दिन सक्छ भन्ने यथार्थ जानकारी हुँदाहुँदै पनि पहिले च्वास्स बोलिहाल्ने कार्यले उनलाई कतिपय अवस्थामा पिरोल्ने गरेको पनि छ ।
पानीजहाज चलाउने, घरघरमा ग्यास पाइप बिच्छ्याएर पु¥याउने, अयोध्यापुरी नै रामको राजधानी रहेको दाबी गर्नेजस्ता कार्यले उनको कद र शौर्य बढाउनेभन्दा घटाउने गरिरहेका छन् । पार्टी सञ्चालनमा गुटलाई ज्यादा मलजल गर्ने प्रवृत्ति पनि उनमा छ । मुख्यमन्त्रीदेखि सरकार बनाउने सिलसिलामा एउटा निश्चित मापदण्डभन्दा पनि आफ्ना निकटतम सहयोगीहरुलाई चयन गर्ने, सरकारमा पनि आफ्ना निकटतम नेतालाई सरकारमा ल्याउने कार्यले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुलाई चिढ्याएको देखिन्छ । सरकार निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने एउटा विधि र पद्धति बनाएर सोहीअनुरुप चले सबैले साथ दिन कर लाग्छ । तर, उनले त्यसलाई बेवास्ता गरी आफ्नै तरिकाले चलाउन खोज्दा राम्रो र भलो नियतले गरिएको भए पनि त्यो उनैका निम्ति पनि सुखद बन्न सकिरहेको देखिन्न ।
बेलाबेलामा बेमौसमी बाजा बजाएर अरुलाई उत्तेजित बनाइराख्ने शैलीले पनि उनलाई हित गरिरहेको छैन । विश्वासमा लिने र सम्मानजनक स्थान दिनेभन्दा आफूलाई अप्ठ्यारो परेका बेलामा मात्र गुहार्ने र भाउ दिने प्रवृत्तिले धेरै नेता रिस साध्न, कुण्ठा शमन गर्न र शेखी झार्न पनि प्रचण्डलाई साथ दिन पुगिरहेका देखिन्छन् । आफूलाई गाह्रोसाह्रो पर्दा मतलबै नराख्ने, गाह्रोसाह्रो पर्दामात्रै सम्झने, सम्मान गर्ने र पदको प्रलोभन देखाउने, सबैलाई सम्मान र स्थान नदिने शैलीलाई भने ओलीले सच्याउनु जरूरी छ ।
प्रचण्ड जति देख्दा भलादमी लाग्छन् उति नै उनी कुटिल र स्वार्थी छन् । स्वार्थका लागि जे पनि गर्न पछि नहट्ने चिन्तन विगतमा भन्दा बढ्दो उपक्रममा जाँदो छ । मह¤वाकांक्षा हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न, तर वैयक्तिक अतिशय मह¤वाकांक्षा भने हरेकका निम्ति सुखद हुँदैन । कि एकल पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमन्त्री उनको वर्तमानको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यो आफ्नो अभीष्टमा सर्वाधिक बाधक बनेर खडा भएका छन् अर्का अध्यक्ष ओली । ओलीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि आफैँ बनिरहने सोच र व्यवहार उनलाई पटक्कै पचेको देखिन्न । पूर्वएमाओवादीको अध्यक्ष हुँदा गर्ने गरेको एकल निर्णय र हालीमुहाली दुई पार्टीको एकीकरणपछि खट्किरहेछ उनलाई । यहाँ पनि त्यहाँजस्तै सर्वेसर्वा निर्णय गर्ने र दाइँ गर्ने मनोविज्ञान बोकेर आएका थिए र त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या सृजना भइरहेको लाग्दछ ।
माधवकुमार नेपाल आफैँमा शालीन, सहनशील र भावुक हुँदाहुँदै पनि ओलीको रूखो व्यवहार र असहिष्णु स्वभावका कारण सधैँ दुःखी र कुण्ठित बन्नु परिरहेछ । यसबाट त्राण पाउन, उनलाई पाठ सिकाउने र साइजमा राख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको तथ्य बुझेका नेपालले उपयुक्त अवसरको खोजी गर्नुलाई अन्यथा मान्नु उपयुक्त नहोला । तर, सिंहलाई तह लगाउने नाउँमा ब्वाँसालाई पोस्ने स्यालको चालाचाहिँ अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्दछ ।
झलनाथ खनाल पनि शालीन र भद्र हुँदाहुँदै पनि अध्यक्ष ओलीले नसोध्ने, नखोज्ने र मतलबसमेत नराख्ने गरेपछि उनीसँग हुनसम्मको रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो । आफू चाइना गएका बखत पार्टीको वरिष्ठता पद नेपाललाई दिइएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध त्यसै पनि तिक्त बनिरहेको स्थिति छँदै थियो । अझ ओलीले वामदेव र नेपाललाई खोज्ने तर उनलाई मतलबै नराख्ने गरिँदा उनको मन त्यसै पनि रूष्ट हुन पुगेको छ । त्यसर्थ, ओलीलाई साइजमा ल्याउने र आफ्नो शाख जोगाउने लक्ष्यमा उनी पनि साथ दिइरहेको लाग्छ ।
वामदेव सत्तासीन हुन लालायित रहेको जग जाहेरै छ । त्यो ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म हुन्न कि भन्ने लाग्छ उनलाई । धेरैपटक ओलीले प्रलोभन देखाए पनि कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उनी नबढेपछि ओलीप्रति उनी त्यति विश्वस्त देखिन्नन् । बरू, माकुने र प्रचण्डहरुले नै सत्ताको बाग्डोर सम्हाल्नेसम्मको तहमा पु¥याउलान् कि भन्ने पनि लाग्छ । ओलीको साथ र समर्थनविना त्यहाँ अरुले पु¥याउन सक्दैनन् कि भन्ने पनि लाग्छ । यसैले यताउति गरिरहन्छन् उनी । सकेसम्म मोलमोलाहिजा गर्ने क्रममा जसबाट लाभ बढी मिल्न सक्छ उतै लाग्ने दाउमा छन् यिनी ।
सचिवालयमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको पद प्राप्त गरिसकेका छन् । रामबहादुर थापा बादल हाल गृहमन्त्री पदमा आसीन रहेकाले सत्ता ढलेपछि पुनः सोही पदमा रहिरहन असम्भवप्रायको स्थिति पैदा हुने सम्भावना रहेकाले यसै सरकारलाई साथ र समर्थन गरिरहनुमै भलाइ देख्छन् । सुवासचन्द्र नेम्बाङ संघीय संसद्का सत्तापक्षीय बेञ्चका उपनेता हुन् । उनलाई झट्ट हेर्दा समीकरण बदल्दा लाभभन्दा हानि नै देखिरहेको र बनिरहेको शाख पनि गुम्ने र पुनः त्यही स्थितिमा आउन कठिन सम्झिरहेका हुन सक्तछन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ स्वाभिमानी र स्पष्ट वक्ता देखिए पनि हारेर पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न नैतिक रुपले हिच्किचाएनन् । सत्तासमीकरण हुन सके अब मन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ उनलाई पनि ।
यस प्रकार नेकपाभित्रको विवाद, अन्तर्विवाद, कलह, वैमनस्य, द्वन्द्व आदि जुन कुनै शब्दको प्रयोग गरिए पनि त्यो रुपमा हेर्दा पार्टीको विधि, पद्धति, नीति–नियम र संस्थागत विकासका लागि जस्तो देखिन्छ तर सारमा पद, प्रतिष्ठा, मनोकुण्ठाहरुको शमन र प्रतिशोध साध्ने मनोभावनाबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । यदि विधि र पद्धतिको विकासकै निम्ति गरिएको छलफल र वादविवाद भएको भए त्यसले निश्चय नै नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको विकास, देशको भलाइ र जनताको भलाइ हुने कुरामा दुईमत रहने थिएन । तर दुर्भाग्य ! आफू सदैव शक्तिशाली बनिरहने, बन्न नदिनेलाई किनारा लगाएर भए पनि आफू बन्ने र बनिरहने, सधैँ आफ्नो बर्चस्व कायम रहिरहोस् भन्ने जंगली प्रवृत्तिको राजनीतिक कार्यकलापले सिङ्गो मुलुकको अवस्था दयनीय र रूग्ण बन्न गएको छ । उसलाई हटाउन पाए बल्ल खान्थ्यो वा उसलाई सत्तामा पुग्नबाट रोक्न सकिए आनन्द मिल्थ्यो भन्ने पिसाबको क्षणिक न्यानोपनलाई न्यानो भइरहने ठान्ने नकारात्मक सोच तलबाट माथितिर सरेको नभई माथितिरबाट तलतिर सर्दै आएको प्रमाण हो ।
इतिहासमा सत्ता र शक्तिका लागि रणोद्दीप मारिएको, देवशमशेरले डाँडो काट्नु परेको पढिरहँदा दुःख लाग्छ हामीलाई । तर, त्यसको झन्डै सवा सय वर्षपछि पनि यस्तै किचलोपूर्ण राजनीतिक व्यवहार र चिन्तनबाट हाम्रो राजनीति कहाँ उठ्न सकेको छ र ? राणाकालीन शक्ति संघर्षभन्दा वर्तमानकालीन राजनीतिक शक्ति संघर्ष केकति कारणले फरक छ र ? माथिकाले दबाउने, तलकाले दबाउनेलाई परास्त गर्ने र कथञ्चित आफू त्यहाँ पुगिहालेमा अघि दबिनेले पनि मुनिकालाई त्योभन्दा पनि बेस्सरी दबाइराख्न चेष्टा गर्ने चक्र चल्दो छ । यसबाट त्राण पाउने भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सकारात्मक सोच बोकेका पूर्णतः नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा ल्याउन सकिएबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा, यो दुर्भाग्य भोग्दै जानुको विकल्प शायदै होला !